Raveloaritiana Mamisoa · Aogositra 2015 · Global Voices teny Malagasy
Raveloaritiana Mamisoa · Aogositra, 2015
Lahatsoratra farany an'i Raveloaritiana Mamisoa tamin'ny Aogositra, 2015
Am-polo Taonany ny Demaokrasian'i Arzantina, Nahoana No Mbola Mitohy Ny Fanjavonan'Olona?
Arzantina 31 Aogositra 2015
Na dia teo aza ny 32 taonan'ny demaokrasia, mbola an'arivony ireo olona, indrindra ny vehivavy sy ny tovovavy no mbola tsy hita popoka ao Arzantina. Ary mbola maro ireo nanjavona.
Nahazo Aina Vaovao Indray Ilay Afisim-pizahantany Mametraka An'i Jamaika Ao Anaty Sarintany
Nahasarika olona maro indray ilay azo lazaina fa angamba afisim-pizahantany malaza indrindra manerantany noho ny fanatontosana iray nataon'ilay Amerikana mpiangaly mozika Alicia Keys.
Zanakalahin'ny Mpanohitra Mpitarika Ny Hetsika Maitso Manohana Ny Fifanarahana Ara-nokleary Iraniana
"Amin'ny maha-Mpampianatra lalàna noraràna tsy hampianatra ao Iran, sady mpikatroka mpanohana ny demokrasia. manohana tanteraka ny fifampiraharahana ara-nokleary aho," Hoy i Mohammad Taghi Karoubi tamin'ny lahatsary.
Refodrefotra sy poa-basy tao amin'ny lapa Dolmabahçe ao Istanbul
Lehilahy roa voalaza fa mitam-piadiana no voasambotra taorian'ny refodrefotra sy ny poa-basy nanakoako tao amin'ny lapa Dolmabahçe ao Istanbul, toerana manintona ny mpizahatany sady misy ny biraon'ny praiminisitra Tiorka Ahmet Davutoglu.
Azia Atsinanana 24 Aogositra 2015